Zoo Animal Neck Gaiter ဆိုင်ကယ်မျက်နှာဖုံးများ Halloween Mask - Come4Buy eShop
Zoo Animal Neck Gaiter ဆိုင်ကယ်မျက်နှာဖုံးများ Halloween Mask
36 နောက်ဆုံးတွင်ရောင်းချ4နာရီ
$ 14.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 23.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဝံပုလွေမျက်နှာဖုံး Border Collie Mask ဂျာမန်သိုးထိန်းခွေး Mask Fox ကမျက်နှာဖုံး Husky Mask Corgi ခွေးမျက်နှာဖုံး ရယ်စရာ Raccoon Mask French Bulldog Mask LiHua Mao Mask ဗြိတိသျှ Tuxedo ကြောင်မျက်နှာဖုံး Silver Tabby America Mask တရုတ် LiHua Mao Mask Exotic Shorthair Mask Gorilla Mask Gorilla Anger Mask ချင်ပန်ဇီမျက်နှာဖုံး ရယ်စရာ ချင်ပန်ဇီမျက်နှာဖုံး Smile Chimpanzee Mask Ferocious Tiger Mask ကျားမျက်နှာဖုံး Raccoon Mask Skull Skeleton Ghost Mask ရုရှားအညိုရောင်ဝက်ဝံမျက်နှာဖုံး လင်းယုန်ငှက်မျက်နှာဖုံး
1PCS2PCS ။5PCS ။
Wolf Mask / 1PCS Wolf Mask / 2PCS ။ Wolf Mask / 5PCS ။ Border Collie Mask / 1PCS Border Collie Mask / 2PCS ။ Border Collie Mask / 5PCS ။ ဂျာမန်သိုးထိန်းခွေး Mask / 1PCS ဂျာမန်သိုးထိန်းခွေး Mask / 2PCS ။ ဂျာမန်သိုးထိန်းခွေး Mask / 5PCS ။ Fox Mask / 1PCS Fox Mask / 2PCS ။ Fox Mask / 5PCS ။ Husky Mask / 1PCS Husky Mask / 2PCS ။ Husky Mask / 5PCS ။ Corgi Dog Mask / 1PCS Corgi Dog Mask / 2PCS ။ Corgi Dog Mask / 5PCS ။ ရယ်စရာ Raccoon Mask / 1PCS ရယ်စရာ Raccoon Mask / 2PCS။ ရယ်စရာ Raccoon Mask / 5PCS။ French Bulldog Mask / 1PCS French Bulldog Mask / 2PCS ။ French Bulldog Mask / 5PCS ။ LiHua Mao Mask / 1PCS LiHua Mao Mask / 2PCS ။ LiHua Mao Mask / 5PCS ။ ဗြိတိသျှ Tuxedo Cat Mask / 1PCS British Tuxedo Cat Mask / 2PCS ။ British Tuxedo Cat Mask / 5PCS ။ ငွေရောင် Tabby America Mask / 1PCS ငွေရောင် Tabby America Mask / 2PCS ။ ငွေရောင် Tabby America Mask / 5PCS ။ တရုတ် LiHua Mao Mask / 1PCS တရုတ် LiHua Mao Mask / 2PCS ။ တရုတ် LiHua Mao Mask / 5PCS ။ Exotic Shorthair Mask / 1PCS Exotic Shorthair Mask / 2PCS ။ Exotic Shorthair Mask / 5PCS ။ Gorilla Mask / 1PCS Gorilla Mask / 2PCS ။ Gorilla Mask / 5PCS ။ Gorilla Anger Mask / 1PCS Gorilla Anger Mask / 2PCS ။ Gorilla Anger Mask / 5PCS ။ ချင်ပန်ဇီမျက်နှာဖုံး / 1PCS Chimpanzee Mask / 2PCS ။ Chimpanzee Mask / 5PCS ။ ရယ်စရာ Chimpanzee Mask / 1PCS ရယ်စရာ Chimpanzee Mask / 2PCS။ ရယ်စရာ Chimpanzee Mask / 5PCS။ Smile Chimpanzee Mask / 1PCS Smile Chimpanzee Mask / 2PCS ။ Smile Chimpanzee Mask / 5PCS ။ Ferocious Tiger Mask / 1PCS Ferocious Tiger Mask / 2PCS ။ Ferocious Tiger Mask / 5PCS ။ Tiger Mask / 1PCS Tiger Mask / 2PCS ။ Tiger Mask / 5PCS ။ Raccoon Mask / 1PCS Raccoon Mask / 2PCS ။ Raccoon Mask / 5PCS ။ Skull Skeleton Ghost Mask / 1PCS Skull Skeleton Ghost Mask / 2PCS ။ Skull Skeleton Ghost Mask / 5PCS ။ ရုရှားအညိုရောင်ဝက်ဝံမျက်နှာဖုံး / 1PCS ရုရှားအညိုရောင်ဝက်ဝံမျက်နှာဖုံး / 2PCS ။ ရုရှားအညိုရောင်ဝက်ဝံမျက်နှာဖုံး / 5PCS ။ Bald Eagle Bird Mask / 1PCS Bald Eagle Bird Mask / 2PCS ။ Bald Eagle Bird Mask / 5PCS ။
မြန်မြန်၊ အရေအတွက်နည်းပါတယ်။မြန်မြန် - သာလျှင် 88 လက်ကျန်
Halloween မျက်နှာဖုံး တိရိစ္ဆာန်ရိုက်နှိပ်ထားသော မျက်နှာဖုံးများ Ghost Grim Neck Gaiter နွေးထွေးသော လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ဆိုင်ကယ် Balaclava မျက်နှာဖုံးများ ဆောင်းရာသီနှင်းလျှောစီး Halloween Snowboard စက်ဘီးစီး Biker ။ တိုက်ရိုက်အက်ရှင်ဂိမ်းများ၊ ခရစ္စမတ်ပါတီ၊ မွေးနေ့ပါတီ...... (တိုက်ရိုက်အက်ရှင် CS) Halloween သရုပ်ဆောင် ကျားကွက်များကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းများ။ နေရောင်ခြည်၊ လေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုကာကွယ်ပါ။
British Bicolor Cat Mask
ရယ်စရာ Husky2Mask
တရုတ် Li Hua Cat Mask
Li Hua Cat 1 Mask
ရယ်စရာ Racoon Mask
Ferocious Tiger Mask
Shorthair Cat 02 Mask
Funny Chai Dog Mask
Chai Dog Mask ၊
ရယ်စရာ Husky Mask
100% ပရီမီယံ polyester
Halloween ၊Music Festivals Raves
နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း။
ကားမောင်းခြင်း၊ စီးခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများ
ငါးဖမ်းခြင်း၊ ချေမှုန်းခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊
နွေ၊ နွေ၊ ဆောင်းဦး
လှိုင်းစီးခြင်း၊ ATV စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစား
ဆိုင်ကယ်၊ ပါတီ၊ အပြေး
ပစ္စည်း - ၈% Polyester တွင် လေဝင်လေထွက် ၊ ဖုန်မှုန့် ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်း ၊ စုပ်ယူနိုင် ၊ အခြောက်ခံနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိပါသည်။ အလွန်နူးညံ့ပြီး အသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်သော၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းနည်းပညာ၊ အက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် မျက်မှိတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်မပါဘဲ ပုံစံရှင်းလင်းပြီး မဖျက်နိုင်သောအရောင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အရွယ်အစား တစ်ခုတည်း : အလျား 36cm(14.2လက်မ)၊ အကျယ် 24cm(9.4လက်မ)
1. လက်ကို ညင်သာစွာ ဆေးကြောပါ။ စက်​မ​လျှော်​၊ ​ဆေး​ကြော​နေ​တာ​ကို ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​။
2. ပထမရေမဆေးမီ အခြားအ၀တ်အစားများနှင့် ခွဲ၍ သမားရိုးကျနည်းလမ်းများဖြင့် သန့်စင်ပေးပါ။
သင်သည် ဤထုတ်ကုန်များကို နှစ်သက်နိုင်သည်။